Ingqokelela yobugcisa entsha ye-illy esayinwe nguMona Hatoum esungulwe ngu-illycaffè
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ingqokelela yobugcisa entsha ye-illy esayinwe nguMona Hatoum esungulwe ngu-illycaffè
I-illycaffè iveza ingqokelela entsha ye-illy Art kwaye, okokuqala, ukufanisa iitoti ezihonjisiweyo ezisayinwe nguMona Hatoum.
Ngemvelaphi yobugcisa egqiba amashumi amane eminyaka, umzobi obonwayo u-Mona Hatoum wamkelwa kwilizwe liphela ngombongo wakhe kunye ne-oeuvre yezopolitiko, eyafezekiswa kuluhlu lwamajelo eendaba ahlukeneyo kwaye ahlala engaqhelekanga, kubandakanya ukufakwa, ukrolo, ividiyo, ukufota kunye nokusebenza ephepheni.
IHatoum yaqala yaziwa ngokubanzi phakathi kwiminyaka yoo-1980 ngothotho lweemiboniso kunye nemisebenzi yevidiyo egxile kakhulu emzimbeni.
Ukusukela kwii-1990s zokuqala umsebenzi wakhe uye watshintshela kufakelo olukhulu kunye nemifanekiso eqingqiweyo ejolise ekubandakanyeni umbukeli kwiimvakalelo ezingqubanayo zomnqweno kunye nokuphindisela, uloyiko kunye nomtsalane.
Ukusukela ngoko, uyaqhubeka nokukhulisa ulwimi apho izinto eziqhelekileyo, zasekhaya zemihla ngemihla zihlala ziguqulwa zibe zizinto zangaphandle, ezokuthengiswa okanye ezisongelayo.